Aqoonkaab Xikmadaha Ku duugan in diinteena islaamku xaraantimayso hogaaminta dumarka. | Aqoonkaab
Jun 21, 2015Arrimaha islaamka
Bilaal axmed cige (deeq)
Previous PostXusuusin mid ka mid ah siraha ku jira soonka. Next Post8 ficil oo dadka guulaystay iska ilaaliyeen inay ku dhacaan.
One thought on “Xikmadaha Ku duugan in diinteena islaamku xaraantimayso hogaaminta dumarka.”
Araweelo December 11, 2019 at 6:26 pm
Xadiiskan aad tusaalaha u soo qaadatay ma khuseeyo hablaha maanta balse wuxuu ka hadlaayaa gabadh faaris xukuntay.